Luminescences na ala ọma jijiji, Mpaghara onyinye na ịdọ aka na ntị oge | Network Meteorology
David melguizo | | Ciencia, Meteorology, Netwọk Mgbasa Ozi
Mmetụta nke ala ọma jijiji L'Aquila
Ihe omumu na ihe omuma nke ihe omuma ohuru na ala ọma jijiji (ihe omimi di omimi nke akukoworo tupu ya na oge mbujiji nke ala oma jijiji) ekpebiela na otutu oge ha metutara mpaghara Rift, ebe uwa kewara. Ọmụmụ ihe anyị na-ezo aka na ya bụ nke kachasị na-aza ọkụ ọkụ ndị a, nke ndị ji anya ha hụ ihe mere kọwaara ya ọtụtụ narị afọ ndị ka dị taa na-enweghị nkọwa sayensị zuru oke.
Ọrụ a, nke ndị bipụtara Akwụkwọ Ozi Seismological Research, guzobere ọtụtụ nyocha iji chọpụta usoro esi eji ọkụ ọkụ a. Ndị na-ede akwụkwọ na-atụ aro na ike nke nkume na-asọrịta ibe ha n'oge ala ọma jijiji ahụ na-ewepụta ọkụ eletrik. Ọbara ndị a na-ebili site na mmejọ vetikal ma ọ bụ nke aghụghọ, nke a na-ahụkarị na mpaghara Rift. Mgbe ha rutere n'elu, ha na-abanye na mbara igwe, na-emepụta mmeghachi omume nke na-enye ìhè.
Ọkụ ndị metụtara ala ọma jijiji bụ ezigbo ihe ịtụnanya, enweghị ike karịrị nke mmadụ (UFO, amoosu, wdg) nke na-eme ha, enwere ike ịkọwa ya na sayensị. Ọ bụ ezie na ugbua na ụbọchị ya ọbụna Iker Jiménez raara onwe ya nye ihe omume zuru oke nke «Ala Ọma Jijiji na ihe ọmụma».
Nke mbụ na-enwe obi abụọ
Otu n’ime nsogbu ịmụ ihe banyere ọkụ ala ọma jijiji bụ na ọtụtụ akụkọ metụtara Marginal na Sciences Paranormal. Witnessesfọdụ ndị akaebe na-ekwu maka ire ọkụ na jets nke anwụrụ ọkụ na-abịa site na ụwa, ndị ọzọ nke igwe ojii na-enwu gbaa nke nwere ike ịbụ auroras, ma ọ bụ ụzarị nke ọkụ eluigwe nwere ike ịbụ meteorites.
Mana enweghi ike ịkọwa ọtụtụ akụkọ n'ụzọ dị mfe. Dịka ọmụmaatụ, na New England, otu nwoke na-ebu nkịta ya gaa ije n'ehihie Ọktọba chere na ụwa malitere ịma jijiji ma hụ ka bọl ọkụ na-agafe anụmanụ ahụ, nke malitere iti mkpu.
Ihe mgbagwoju anya nke ubi a putara na, obu ezie na enwere mmasi di uku inabata otutu ihe banyere nkpuru osisi ndia ndi ozo, obughi ebe omumu ihe nihi na odiri ka ogagh abu ike ime ha.
Ndị otu ndị ọkà mmụta sayensị kpebiri ịnakọta akụkọ niile ha nwere ike ịchọta, site na 1600 ruo taa. Ha chọtara ala ọmajiji iri abụọ na asaa dị na America na 27 na Europe, bụ nke a na-ahụ luminescences kwesịrị ka a tụlee ya, bụ nke pụtara nakọtara site na akụkọ ndị ọzọ.
N'ime peruvian n'ụsọ oké osimiriN’ọnwa Ọgọst 2007, otu onye ọkụ azụ̀ kwuru na ihu igwe gbachapụrụ agbachapụ ruo ọtụtụ minit tupu oké osimiri amalite ịmajiji. Na November 1911, na nso nso Ebingen, Germany, otu nwanyị kwuru na-enwupụ enwu nke na-agagharị n’elu ala dịka agwọ tutu amalite ịma jijiji.
N'ime ala ọma jijiji 65 ahụ amụrụ, 56 mere na mpaghara Rift na-arụ ọrụ. Na 63 nke 65 mere na nso-agbawa agbawa mgbawa mpaghara, na-emegide akụkụ ndị dị nro jikọtara na mmejọ ndị ka ukwuu.
Uche a nwere ike ịkọwa ọdịdị nke ọkụ ahụ, ka Thériault na ndị ọrụ ibe ya, na-ekwu maka otu n'ime ngalaba nke ọmụmụ ihe ahụ. Onye ọzọ so n’òtù ahụ, Friedemann Freund, onye ọkà n’ihe ọmụmụ physics na NASA Ames Reseach Center na Moffett Field, California, na-enyo enyo na ihe niile malitere ntụpọ na nkume, ebe ikuku oxygen dị na mineral chemical na-efunahụ elektrọn.
Mgbe ike nke ala ọma jijiji rụpụtara rutere na nkume, ọ na-agbaji agbụ ndị metụtara ịdị n'otu a, na -emepụta oghere nke ụgwọ eletrik dị mma. Ndị a oghere p ha nwere ike ịsọpu n'elu na ala site na mmejọ ahụ, na-eme ka mpaghara eletriki mpaghara dị ike nke nwere ike ịmepụta ọkụ.
Nnukwu afanyekwa, na-abịaru ụlọ nyocha
Nnyocha ụlọ nyocha egosiwo na enwere ike ịmepụta ọkụ eletrik n'ụdị nkume ụfọdụ site na ịkụcha. Mana echiche Freund bụ otu n'ime ọtụtụ usoro enwere ike ịkọwa ọkụ ndị emere na ala ọma jijiji.
Ndepụta nke a nwetara na-atụ aro echiche ndị ọzọ maka ịmụ ọkụ ndị a, ka Thériaul na-ekwu. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-amụ banyere seismologists na-amụ banyere mmejọ na-arụ ọrụ enweela ike ịhụ mgbanwe na nrụpụta eletriki nke ala n'oge gara aga na n'oge ịma jijiji.
N'ozuzu, na-ele ọkụ ọkụ metụtara ala ọma jijiji gburugburu ụwa, anyị nwere ike ịsị na ha nwere ike ịdọ anyị aka na ala ọma jijiji dịka ịdọ aka ná ntị mbụ banyere ịma jijiji.
Ihe omume a enweworị ihe ndị na-eme ka ndị mmadụ mara. Dịka ọmụmaatụ, na nso L'Aquila Italia na Eprel 2009, otu nwoke hụrụ ọkụ na-acha ọcha na-abịa site na kichin kichin n'isi ụtụtụ ma tinye ezinụlọ ya na nchekwa. Mgbe awa abụọ gachara, nke ahụ bụ mgbe mbibi ala ọma jijiji anyị niile nụrụ banyere ya mere.
Ikekwe, a ga-atụle ya iji lekwasị anya na ụdị ihe a ma chọpụta na ọmụmụ ihe na-agwụ ike ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịdọ aka ná ntị maka oke ụjọ.
Ozi ndi ozo: Ala ọmajiji abụọ siri ike gburu ma ọ dịkarịa ala 75 na China, Ala ọma jijiji 6,0 maa jijiji na Peru
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Luminescences na ala ọma jijiji, Rift zones na ịdọ aka ná ntị oge mbụ